မျက်စိထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း - Hello Sayarwon - Page 1 of 2
မျက်စိထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း သည် အမြင်အာရုံကို မထိခိုက်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ စောင့်ရှောက်သင့်သလဲဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။
အိပ်ရေးပျက်တာက မကောင်းဘူးဆိုတာကိုတော့ တော်တော်များများက သိထားပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ အိပ်ရေးပျက်တာက ကိုယ်ခံအားကို အားနည်းစေပြီး ဖျားနာလွယ်တယ်။ စိတ်ဖိစီးစေပြီး ရေရှည်မှာ စိတ်ဓာတ်ကျလာစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ အားလုံးလိုလို သိထားပြီးသားပါ။ နောက်တစ်ချက်က အိပ်ရေးပျက်တာက ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျဆင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတာပါ။ အိပ်ရေးပျက်တဲ့အခါ အာရုံစူးစိုက်ဖို့ ခက်လာပြီး ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေလည်း ကျဆင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဒီအချက်တွေတင် မဟုတ်ဘဲ အိပ်ရေးပျက်တာကြောင့် နေ့စဉ်ဘဝမှာ အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ထိခိုက်လာစေနိုင်တဲ့အကြောင်းလေး ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်တာကြောင့် ထိခိုက်လာနိုင်တဲ့ နေ့စဉ်ဘဝအတွက် အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ယနေ့ခေတ်မှာ ညဘက်ကို ဖုန်းသုံးရင်း၊ ဂိမ်းဆော့ရင်းနဲ့ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်မိတယ်ဆိုသူက ခပ်ရှားရှားပါ။ ညတိုင်းမှာ အိပ်ချိန် ပြည့်ဝတဲ့သူဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့ရတဲ့ အနေအထားပါ။ အိပ်ရေးပျက်တာက နောက်တစ်နေ့တာရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတင် ထိခိုက်စေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အရေးပါတဲ့ […]
Dr. Htet Htet Zaw Win မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ •3ပတ် အကြာက
မျက်မှန်တပ်သူတိုင်း သိထားဖို့ လိုတဲ့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ
Contact lenses လို့ခေါ်တဲ့ မျက်ကပ်မှန် လေးတွေ တပ်မယ်ဆိုရင်
နေကာမျက်မှန် ကို ဘာကြောင့်တပ်သင့်သလဲ။
Dr. Thurein Hlaing Win မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 08/07/2020
နေကြတ်တဲ့အခါ မျက်စိနဲ့ တိုက်ရိုက် မကြည့်သင့်ပါ။
မျက်စိထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း နဲ့ ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုသိရှိလိုသည်
ရွှေသမင်လို မျက်ဝန်းလှလှလေး ပိုင်ဆိုင်စေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက်များ
ရွှေသမင်လို ရွှန်းစိုတောက်ပတဲ့ မျက်ဝန်းလှလှလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတာကို အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှတရားတစ်ခုလို့ မြန်မာတွေက တင်စားခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ ရွှေသမင်လို မျက်ဝန်းဆိုတာက မျက်လုံးအစုံလိုက် ရွှေသမင်နဲ့ တူနေတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ သမင်မျက်ဝန်းလို ရွှန်းစိုတောက်ပနေတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ရွှန်းစိုလှပတဲ့ မျက်ဝန်းလေးတစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်နေဖို့ဆိုရင် နေထိုင်ပုံ၊ စားသောက်ပုံတွေမှာ နည်းမှန် လမ်းမှန်နဲ့ နေထိုင်စားသောက်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နေချင်သလိုနေ၊ စားချင်သလိုစားပြီး မျက်စိကျန်းမာရေးကို ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် မွေးရာပါလှပတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတောင်မှ အဲ့ဒီအလှတရားကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးသွားရနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ မျက်ဝန်းလေး လှပနေဖို့ဆိုရင် အနေအထိုင် အစားအသောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လို နေထိုင်၊ စားသောက်ရမယ်ဆိုတာကို လမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။ မျက်ဝန်းကျန်းမာလှပစေသော အစားအစာနှင့် အာဟာရများ မျက်ဝန်းကို ရွှန်းစိုလှပစေဖို့ မှီဝဲပေးသင့်တဲ့ အစားအစာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ဗီတာမင် C ဓာတ်ကြွယ်ဝသည့် အသီးအနှံများ (လိမ္မော်သီး၊ သရက်သီး၊ စတော်ဘယ်ရီသီး) ၂။ […]
Dr. Thurein Hlaing Win မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 21/07/2020
နုနယ်လှတဲ့ မျက်ဝန်းအစုံကို ဂရုစိုက်ကြမယ်
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ အနုနယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မျက်လုံးကို ပစ်မထားပါနဲ့။ လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဂရုစိုက်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ (၁) အစားကောင်းကောင်းစားရအောင် သင့်တော်တဲ့ အစားအစာကို ရွေးချယ်စားသောက်တတ်ခြင်းဟာ မျက်လုံးအတွက် အတော်လေး အကျိုးရှိပါတယ်။ အိုမီဂါ - ၃ ဖက်တီးအက်စစ်၊ ဇင့်၊ ဗီတာမင်စီ၊ ဗီတာမင်အီးစတဲ့ အာဟာရတွေကို စားပေးခြင်းဟာ မျက်လုံးမှုန်ဝါးခြင်း၊ အသက်အရွယ်ကြောင့် ယိုယွင်းပျက်စီးလာခြင်းနဲ့ အတွင်းတိမ် ဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အစိမ်းရောင်အရွက်များ(ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ ကိုက်လန်၊ ဂေါ်ဖီစသည်) ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ တူနာငါး ကြက်ဥ၊ မြေပဲ၊ ပဲစိမ်းနဲ့ အသားဟင်းမဟုတ်ဘဲ ပရိုတင်းဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ အရာတွေ လိမ္မော်သီးနဲ့ အခြားအချဉ်ဓာတ်ပါတဲ့ အသီးတွေ ယောက်သွား၊ ကမာနဲ့ ဝက်သားစတဲ့ အစားတွေကို သင့်တင့်မျှတစွာစားပါ။ ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာဟာ ဆီးချိုရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဆီးချိုရောဂါ အမျိုးအစား(၂)ဖြစ်တဲ့အခါ မျက်လုံးကိုပြင်းထန်စွာ […]
Dr. Thurein Hlaing Win မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 10/07/2020
တစ်နေ့လုံး ကွန်ပျူတာကြည့်နေသူတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့်နည်းလမ်းတချို့
အဲကွန်းခန်းလေးထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေတိုင်း ဇိမ်ကျပြီး အရမ်း သက်သာမှာပဲလို့ ထင်တတ်ကြပေမယ့် အဲ့လို အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ သူတွေမှာလည်း ကြုံရတတ်တဲ့ အခက်အခဲတွေ ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့လုံး ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရတာကြောင့် လူက အဝလွန်လာတာ၊ အဆီ၊ ကယ်လိုရီတွေ လောင်ကျွမ်းနှုန်း နှေးသွားတာ၊ မြန်မြန် အိုမင်းရင့်ရော်လာတာ၊ အသားခြောက်တာ၊ သွေးတိုး၊ ဆီးချို ဖြစ်တာတွေအပြင် မျက်လုံးအောင့်၊ မျက်ရိုးကိုက်တာ၊ ညဘက်ဆိုရင် တစ်နေ့လုံး ကွန်ပျူတာ ကြည့်ထားတဲ့ အရှိန်ကြောင့် မျက်စိကြောင်ပြီး အိပ်မပျော်တာ၊ ဇက်ကြောတက်တာ စတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ အမျိုးမျိုး ကြုံရပါတယ်။ ဒီလို အခက်အခဲမျိုးကတော့ မလွဲမသွေ ကြုံရမှာပဲဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကို အနည်းငယ် ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် တချို့သော ပြဿနာတွေကို ကာကွယ်ပေးရာ ရောက်သလို […]
Dr. Thurein Hlaing Win မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • မနေ့က
(၁) တီဗီဖန်သားပြင်နဲ့ နီးကပ်စွာထိုင်ပြီး တီဗီကြည့်ခြင်းဟာ အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ မှားပါတယ်။ စခရင်တွေကို နီးကပ်စွာကြည့်ခြင်းဟာ ကြာလာတဲ့အခါမှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖြစ်လာစေနိုင် ပါတယ်။ အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်းတော့ မရှိပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အဝေးမှုန်တဲ့ကလေးတွေဟာ တီဗီ၊ ကွန်ပြူတာတို့ကို နီးကပ်စွာ ကြည့်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်မယ့်အစား မျက်မှန်တပ်လိုက်ခြင်းက ပိုလို့ အဆင်ပြေ စေမှာပါ။ (၂) အမှောင်ထဲ စာဖတ်ခြင်းဟာ အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ မှားပါတယ်။ တီဗီကို နီးကပ်စွာကြည့်ခြင်းလိုပါပဲ။ သေသေချာချာ မမြင်ရတဲ့အခါ အာရုံစူးစိုက်စွာ ဖတ်ရှုရတာကြောင့် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ခေါင်းကိုက်လာမှာပါ။ အမြင်အာရုံကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်နိုင်ခြင်းမျိုးတော့ မရှိပါဘူး။ (၃) မျက်မှန်၊ မျက်ကပ်မှန်တွေ တပ်ဆင်ခြင်းကြောင့် အမြင်စွမ်းအားကို လျော့နည်းစေလာပြီး မျက်လုံးဟာ ထိုအရာတွေကို အမှီသဟဲပြုပြီးမှပဲ မြင်နိုင်ပါတော့တယ်။ မှားပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့မျက်မှန်၊ မျက်ကပ်မှန်တွေကို တပ်ဆင်ခြင်းဟာ အမြင်အာရုံကို ပိုမဆိုးရွားသွားစေနိုင်ပါဘူး။ […]
မျက်လုံးခြောက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို အဖြေရှာကြမယ်
မျက်လုံးခြောက်တာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ ကြည်လင်ဝင်းပတဲ့ မျက်ဝန်း တစ်စုံကို ရရှိဖို့ မျက်ရည်ထဲမှာ ရေ၊ အချွဲ၊ အဆီ ပမာဏ မျှတစွာ ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီပမာဏ မျှခြေ ပျက်ယွင်းသွားရင်၊ ခမ်းခြောက်နေရင်တော့ မျက်လုံးခြောက်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မျက်လုံးခြောက်နေပြီဆိုတာ သိနိုင်မယ့် လက္ခဏာတွေကတော့ • မျက်မှန် တပ်လိုက်တဲ့အခါ မျက်လုံးက ကြည့်လို့ သိပ်အဆင်မပြေတာ၊ အထဲက ယားသလိုလို နေရခက်သလို ဖြစ်လာတာ • အမြင်အာရုံ ဝေဝါးလာတာ၊ တစ်ခုခု ဖုံးနေတယ်လို့ ခံစားရတာ • မျက်ရည် ခဏခဏ ထွက်တာ၊ သို့မဟုတ် မျက်ရည် လုံးဝ မထွက်နိုင်တော့တာ • မျက်လုံးက ယားယံပြီး နီရဲနေတာ • စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ဖြစ်နေတာ • မျက်လုံးထဲ တစ်ခုခု ဝင်သွားလိုမျိုး ခံစားချက်မျိုး အမြဲ ရနေတာ • မျက်လုံးက […]
Hello Sayarwon Panel မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • မနေ့က
မျက်စိအောင့်တာမျိုး မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
မျက်စိအောင့်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ မျက်လုံးက ဖွင့်ထားနေတဲ့ အချိန်မှာ နာလာတာ၊ ပူစပ်လာတာ၊ မျက်ရည်ပူတွေ ကျလာတာမျိုး၊ အထဲကနေ အောင့်ပြီး ယားယံလာတာမျိုး စတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။ အထူးသဖြင့် အိပ်ခါနီး အချိန်တွေ၊ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကို အကြာကြီး စိုက်ကြည့်ပြီးလို့ မျက်လုံးခွာလိုက်တဲ့ အခါမျိုးမှာ ပိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ မျက်စိကိုက်တာအပြင် မျက်ရိုးကိုက်တယ်လို့လည်း ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်လို နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းတွေကို နေ့စဉ် အချိန်နာရီပေါင်းများစွာ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိသလို ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်ကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ဆိုးကျိုး ဖြစ်နိုင်တာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ အပေါ်မှာ ပြောထားခဲ့တဲ့ မျက်စိအောင့်တာမျိုး၊ အထိုင်များပြီး လှုပ်ရှားမှု နည်းသွားလို့ အဝလွန်လာတာ၊ ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းမှု […]
Dr. Thurein Hlaing Win မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 02/07/2020
အိမ်တွင်းပုန်းလေးတွေ မျက်လုံးညောင်း သက်သာစေဖို့
ခုလို တစ်နေကုန် အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့ အချိန်မှာ အလုပ်အများဆုံးက ဖုန်းကြည့်တာပါပဲ။ သာမန်အချိန်မှာတောင် ဖုန်းကို လက်ကမချနိုင် ဖြစ်နေတာ ခုလို အချိန်မျိုးဆိုရင်တော့ ပြောစရာတောင် မလိုပါဘူး။ ဖုန်းကြည့်လိုက် ဖုန်းအားကုန်ခါနီးရင် ဖုန်းအား သွင်းပြီး တီဗွီသွားကြည့်လိုက် ဂိမ်းဆော့လိုက်နဲ့ ဇယ်ဆက်သလိုပါပဲ။ အလုပ်လည်း သွားစရာ မလိုဘူးဆိုတော့ ညဉ့်နက်တဲ့ အထိ ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရပြီလေ။ ဒါတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့ မျက်လုံးညောင်း လာတာပါပဲ။ မျက်လုံး ဟိုဘက် ဒီဘက်ကြည့်နိုင်ဖို့ဆိုရင် သူ့ဘေးက ကြွက်သားတွေက အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ ကြွက်သားတွေရဲ့ ထုံးစံအရ အလုပ်လုပ်ပါ များရင် ညောင်းလာပါတယ်။ ကိုယ်က စိတ်ဝင်တစား ကြည့်နေလို့သာ မသိတာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ မျက်လုံးက ပင်ပန်းလာပြီး မျက်ရိုးကိုက်တာ၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ဖြစ်တာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ကဲ ဒီတော့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ […]
လူအတော်များများက ရောဂါလို့ဆိုလိုက်ရင် နှလုံးတို့၊ သွေးတိုးတို့လို တကယ့်အကြီးကြီးတွေကို အရင်ပြေးမြင်မိတတ်ကြမှာပါ။တကယ်တော့တစ်ကိုယ်လုံးမှာရောဂါမဖြစ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းဆိုတာမရှိပါဘူး။ ဒီလိုပဲ နေ့တိုင်းမရှိမဖြစ်အသုံးပြုနေရတဲ့ မျက်လုံး၊ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်း လိုအစိတ်အပိုင်းတွေလည်း ပြဿနာပေါ်တတ်တာမေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခုတစ်ခေါက်တော့ ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်းသုံးနေရပြီး ဂရုစိုက်ဖို့မေ့နေတတ်တဲ့ မျက်လုံးတစ်စုံအတွက် ဂရုစိုက်ရမှာလေးတွေ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁. တစ်နှစ်တစ်ခါ မျက်လုံးမစစ်ဆေးဘူး ‘ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက်ပိုကောင်း၏’ ဆိုတာ ဘယ်ရောဂါအတွက်မဆိုမှန်ပါတယ်။ အသက် ၄၀ ကျော်သူတိုင်း ကိုယ့်မျက်လုံးကို တစ်နှစ်တစ်ခါတော့ မှန်မှန်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှရေတိမ်စွဲတာလို အန္တရာယ်များတဲ့မျက်လုံး ရောဂါတချို့ကို အချိန်မီတားဆီးနိုင်မှာပေါ့။ မိသားစုမျိုးရိုးမှာ မျက်လုံးပြဿနာရှိသူတွေဆို ပိုတောင်ဂရုစိုက်စစ်ဆေးသင့်ပါသေးတယ်။ ၂. မျက်လုံးယားနေတာကို ဂရုမစိုက်ဘူး မျက်လုံးကဘာကြောင့်မှန်းမသိဘဲ ခဏခဏယားနေတာ၊ နီရဲလာတာ၊ ပူစပ်ပူလောင်ခံစားရတာတွေက မျက်လုံးပြဿနာတစ်မျိုးမျိုးရဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မျက်လုံးက အလင်းရောင်ဒဏ်မခံနိုင်တာ၊ မျက်တောင်ခတ်ရင် ခိုးလို့ခုလုဖြစ်နေတာ၊ မျက်ဝတ်ခဏခဏထွက်တာတွေကလည်း မျက်စိဆရာဝန်နဲ့ သေချာပြသပြီးလိုအပ်သလို ကုသမှုခံယူသင့်တဲ့အခြေအနေတွေပါ။ ၃. […]
Hello Sayarwon Panel မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ •3ပတ် အကြာက
ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာအသက်ကြီးချင်လား.... အသက်ကြီးတဲ့အထိ မျက်လုံးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ အလှအပတရားတွေကို ခံစားချင်တယ်ဟုတ်။ ဒါဆိုရင်တော့ အခုကတည်းက အစားကို ဂရုစိုက်လို့ အမြင်အာရုံ ကို ဂရုစိုက်ဖို့ ပြောပါရစေနော်။ ဒီလိုပြောရတဲ့အကြောင်းလေးကို ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဆယ်စုနှစ် ၂ စုကြာလေ့လာမှု ရလဒ် ဆယ်စုနှစ် ၂ စုကြာလေ့လာမှုတစ်ရပ်ရဲ့ ရလဒ်အရသိလိုက်ရတာက ငယ်စဉ်မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ စားသောက်မှုပုံစံ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေက အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ အမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဆို မျက်လုံးလေး ကျန်းမာစေဖို့ဘာတွေများစားလို့ ဘာတွေများရှောင်ရမလဲလို့ မေးစရာရှိလာပြီလား...... လေ့လာမှုတော်တော်များများမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတာက အနီရောင်အသားအစားများတာ၊ ဆီကြော်မုန့်တွေစားတာ၊ အဆီများတဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေစားသုံးတာ၊ သန့်စင်ထားတဲ့ ​ကောက်နှံတွေကို စားသုံးတာက နှလုံးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သလို ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေများစေတယ်၊ လို့ပဲ တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ တော်တော်များများ သတိမထားမိလိုက်တာက ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီတဲ့ စားသုံးမှုက နှလုံးရောဂါ နဲ့ […]
မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးအစားအစာ ၇ မျိုး
မျက်စိကျန်းမာရေးကောင်းစေဖို့ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းအချို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါအာဟာရဓါတ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် အေ၊ စီ၊ အီး ဘီတာ ကရိုတင်း ဇင့် omega-3 fatty acid zeaxanthin lutein ဒီအာဟာရဓါတ်တွေအတွက် နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့ အစားအသောက်မျိုးစုံကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဆင့်ဆင့်ပြုပြင်ထားတဲ့ အစားအသောက်တွေမှာ ပြည့်ဝဆီတွေပါဝင်ပြီး သကြားဓါတ်လွန်ကဲစွာ ပါဝင်လို့ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ အောက်ပါအစားအစာတွေကတော့ မျက်လုံးအတွက် အကောင်းဆုံးလို့ ယူဆထားတဲ့အစားအစာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုဟာ ရာသီမရွေး တနှစ်တာကာလပတ်လုံး သက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ အစားအစာမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ငါးအမျိုးမျိုး ငါးအမျိုးမျိုးစားသုံးခြင်းဟာ မျက်စိကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆယ်လ်မွန်ငါး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီငါးတွေမှာ ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ omega-3 fatty acid တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ omega-3 fatty acid […]
Dr. Thant Zin မှ ရေးသားသည်။ • 11/05/2020